Royal Rift: Xariiq xanaaq badan ayaa kacday markii aad xanaaqday & # 039; Shaqaaluhu Waxay U Dagaalamayaan Buugga Boqoradda Bombshell - TELES RELAY
ACCUEIL » DADKA & LIFESTYLE Royal Rift: Xariiq xanaaq badan ayaa ka kacda markaad xanaaqdo. shaqaaluhu waxay u dagaallamayaan buugga bamamka lagu tuuro ee Queen
Wargeyska The Sun ayaa soo wariyey in buugga ay ku shaqayso haweenayda la yiraahdo Angela Kelly ay ka careysiisay xanaaqa shaqaalaha guriga, oo aaminsan in Ms. Kelly ay ka faa'iideysato fursadda si ay wax badan u shaaciso. ku saabsan Weynaantiisa . Eedaysanayaashu waxay ka walaacsan yihiin daabacaadda Ms. Kelly ee ah sawir ay qaadday boqoradda maalin maalmaha ka mid ah buugga. Ilo boqornimo ayaa yidhi, "Buugga Angela Kelly waxay ka xanaajisay fadeexad dhab ah oo ka dhacday guriga.
Inta badan shaqaalaha Boqoradda - oo ay ku jiraan qaar badan oo ka mid ah saraakiisha sare - waxaa la siiyaa mushahar aad u yar waxaana la rajaynayaa inay sirta boqortooyada ku sii hayaan.
"Haatan, Angela waxay ka tagtay caadooyinkan oo dhan si ay lacag ugu urursato nafteeda."
Kelly hadda waxay ku shaqeysaa buugga corgi.
Waxay dhawaan qortay "dhinaca kale ee geeska", halkaas oo ay shaaca ka qaaday in boqoradda aysan ku amri laheyn gogosha dhogorta cusub ee labiskeeda.
Waxaan ognahay in boqoradda ay ku dhowdahay corgi (Sawirka: GETTY)
Angela Kelly waxay qortaa buug ku saabsan boqoradda iyo Corgi (Sawirka: GETTY)
Sawirka boqoradda maalintii sariirta ayaa lagu dhajiyay buuggan waxaana lagu daabacay hi! magazine.
Ilo wareed ayaa sharraxay, “Waxaa jira dood socota oo lagu ogaanayo inay boqoradda runtii ogtahay in sawirka la daabici doono.
"Laakiin Angela waxay ku adkaysatay inay aqoon buuxda u leedahay wax kasta ka hor intaan la daabicin. Waxba kuma noqon karto wax la yaab leh iyada waxayna ku faraxsan tahay natiijooyinka.
"Waxay u egtahay sawir aad u qofeed, oo dad badan oo dhaqameedku aysan qaddarin ku habboonayn."
WAXAA LAGA HELO Maxey u aragtey Princess Margaret inay quus ka taagantahay maalinta boqoradda?
Boqoradda iyo Mrs. Kelly oo ay weheliyaan Dame Anna Wintour (Sawirka: GETTY)
Buckingham Palace wuxuu ku adkaysanayaa: “Boqoraddu waxay si aad ah ugu hawlanayd qorista iyo daabacaadda dhinaca kale ee Lacagta.
"Tani waxay ka tarjumaysaa sannadihii 25 ee xiriirka dhow ee ka dhexeeyay Ms. Kelly iyo sharafteeda."
Kahor magacaabisteeda qoyska boqortooyada, Ms. Kelly waxay ahayd shaqaalihii guriga Safiirka Ingiriiska ee Jarmalka [Mallaby
Boqoradda iyo Prince Philip, Duke of Edinburgh waxay booqasho ku tagtay Sir Christopher waxayna la kulantay Mrs Kelly, oo shaqo la siiyay ka dib markii ay sheegtay inay rabto inay ku laabato Ingiriiska sanadka soo socda.
Gabadhii Sophie Wessex: waa ina ayeeyada mucjisada boqoradda
Farriinta khiyaanada ah ee Kate Middleton ay boqoradda ugu dirtay dhar buluug ah
Saamaynta xoogga leh ee Boqoraddu ku leedahay dhamaadka dagaalkii qaboobaa ayaa la muujiyey
Boqoradda oo leh corgigeeda 1960 (Sawirka: GETTY)
Princess Elizabeth oo leh corgi ku jirta 1936 (Sawirka: GETTY)
Mrs. Kelly waa ay awooddaa Buuggan qoran wuxuu ku dhawaaqay in boqoradda aysan ku dari doonin qaybo dhar cusub oo dhogorta ah labiskeeda.
Waxay awoodi doontaa inay sii waddo isticmaalka timaha dhogorta leh, oo ay ku jiraan dharka.
Boqoradda waxaa lagu yaqaanay jaceylka ay u leedahay corgi.
Khariidad degsiimooyinka Boqortooyada Ingiriiska (Sawirka: EXPRESS)
Marka laga hadlayo taxanaha dokumentiga ah laga bilaabo Netflix ka 2013, cilmiga cilmiga cilmu-nafsiga ee bulshada Kate Roy ayaa sharraxay: "Xayawaankayaga rabaayadeena ah waa kuwo aad u yar sida lacagteena beddelaadda.
Waxay u dhowdahay sida cilmi-nafsi yaqaanku ugu yeeri doono ilmaheena gudaha.
"Waxaan u maleynayaa in arrimahan oo dhan ay quseeyaan qoyska boqortooyada, gaar ahaan boqoradda, marka loo eego inteena kale. Haddii aad ka fikirtid arrintaas, waa inay ahaataa mid sii cadaadis badan, xanniban, dhowran oo mudan, in inteeda kale ay isu keentay, oo ay aad u yar tahay fursadda ay ku muujineyso waxa ay runti dareento. "
Boqoradda iyo Philippe ee 1959 (Sawirka: GETTY)
Le père de la reine, le roi George VI, fut le premier à introduire l'espèce canine dans la famille royale.
En 1933, George en a acquis deux, une pour chacune de ses filles - la reine et la princesse Margaret, comtesse de Snowdon.
PHOTOS. Christina Milian Pregnant: Muuqaalka xiisaha leh ee Matt Pokora, waxay ku soo bandhigeysaa caloosheeda wareegsan dhar isku xiga
Tilmaamaha: 35 siyaabo Crazy loo kariyo ukunta
Kooxda Faransiiska - Euro 2020: Marka hore, France waxay ka baxeysaa dhibaato ka dhan ah Moldova - FOOT 01
Big Cable kaliya waxay ku duubeen 2 milyan oo macaamiishood ah oo daalan - BGR
Shirkadda korontadaada ayaa aad uga xanaaqsan annaga oo kuu sheegayna sanduuqan 59 $ kaas oo badbaadin doona boqolaal doolar - BGR
Ben Affleck: isbarbar dhigaan xun ee u dhexeeya doorkiisii ​​ugu dambeeyay iyo noloshiisii ​​dhabta ahayd
DADKA & LIFESTYLE7,501
Video dheeraad ah3,435